तपाईंको क्यानाडा आयकर रिटर्न कसरी फाइल गर्ने
यदि तपाइँ आयकरको तिर्नु भयो र म्यादको समय पछि आफ्नो आय कर रिटर्न फाइल गर्नुहुन्छ, क्यानाडा राजस्व एजेन्सी (सीआरए) अनपेड रकममा दण्ड र ब्याज चार्ज गर्नेछ।
क्यानाडा आयकर रिटर्न फाइल को लागी छ?
प्राय: क्यानाडाका बासिन्दाहरूले पछिल्लो वर्षको लागि क्यानाडा आयकर रिटर्न फाइल गर्नका लागि आयकर बकाया रकम तिर्नका लागि, रोजगारी बीमा, र / वा केहि निश्चित लाभहरू जस्तै जीएसटी / एचएसटी जस्तै दावी पुरानो आयु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत क्रडिट वा ग्यारेन्टी आय पूरक।
केही अन्तर्राष्ट्रिय र गैर-निवासी व्यक्तिहरूले क्यानाडा आयकर रिटर्न पनि फाइल गर्नुपर्छ।
तपाईंको आयकर रिटर्न तयार गर्नु अघि
तपाईं आफ्नो आयकर रिटर्न लाई निलम्बन गर्नु अघि, तपाइँसँग निम्न जानकारी छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्:
सामाजिक बीमा नम्बर
कर जानकारी स्लिप्स - नियोक्ताहरू, बैंकिङहरू र व्यवसायहरूले पठाएका सूचना स्लिपहरू तपाईंलाई बताउन र क्यान्सर राजस्व एजेन्सीलाई कति कमाई र कटौती भएको आयकरको रकम बताउन।
अन्य आयमा जानकारी, स्व-रोजगार आय सहित
कर कटौतीका लागि प्राप्तिहरू
व्यक्तिगत आयकर जानकारी तपाईले मेरो खाता कर सेवाबाट आवश्यक हुन सक्दछ, जस्तै तपाईंको RRSP योगदान सीमा ।
तपाईंको आयकर प्याकेज, फारम र सूचना मार्गदर्शिकाहरू सङ्कलन गर्नुहोस्
तपाईंका करहरू फाइल गर्न, तपाईंले प्राविधिक लागि आयकर प्याकेज चाहिन्छ जसमा तपाईं अघिल्लो वर्ष डिसेम्बर 31 मा रहनुभयो। प्याकेजले फिर्ती (फारम), संघीय कर कार्यपत्र, कार्यक्रमहरू (थप ढाँचाहरू), एक प्राविधिक वा क्षेत्र कर कार्यपत्रपत्र र एक जानकारी गाइड समावेश गर्दछ।
2013 मा, अपशिष्ट घटाउनको लागि, सीआरएले स्वचालित रूपमा आयकर प्याकेजहरू प्रत्येक वर्षमा आयकर फिर्ता फर्काउनु भएकोमा सबैलाई पठाउन रोक्यो।
यदि तपाईं आफ्नो कर अनलाइन फाइल गर्नुहुन्छ भने, कर प्याकेज सफ्टवेयरको साथ आउँछ। निश्चित गर्नुहोस् तपाईंले आफ्नो कर स्थिति पूरा गर्ने सफ्टवेयरको संस्करण प्राप्त गर्नुहोला।
तपाईंको आय कर फाइल गर्न उत्तम तरिका छान्नुहोस्
क्यानाडा राजस्व एजेन्सीले क्यानाडाहरूलाई आफ्नो आय कर अनलाइन गर्न फाइललाई प्रोत्साहित गर्दछ। तपाईं अझै पनि मेल गरेर आफ्नो कर फाइल गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको काम गर्न कसैलाई भर्ती गरेर। तपाईंको क्यानाडा आयकर फाइल गर्न4तरिकाहरू छन्। तपाईंको र तपाईंको आयकर स्थितिको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छान्नुहोस्।
विस्तृत जानकारी र मद्दत खोज्नुहोस्
तपाईंको विशिष्ट कर प्रश्नहरूको जवाफ दिन उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरू छन्। तपाईंको क्यानाडा आयकरको साथ सहयोग पत्ता लगाउनका लागि यहाँ केहि राम्रो ठाउँहरू छन्।
तपाईंको करहरु तिर्नुहोस्
तपाईं सीआरएको मेरो भुक्तानी सेवा प्रयोग गरेर वा क्यानेडियन वित्तीय संस्थामा भुक्तानी गरेर, तपाईंको नियमित अनलाइन वा टेलिफोन बैंकिङ प्रयोग गरेर सीआरए जाँच गर्न मेल गरेर आफ्नो क्यानेडियन आयकर तिर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँले आफ्नो करों तिर्नु पर्ने छ भने, तपाइँ पूर्व-अधिकृत डेबिट प्लान सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ।
क्यानाडा कर भुक्तानीको प्रत्यक्ष जम्माको व्यवस्था गर्नुहोस्
क्यानाडा सरकारले अप्रिल 2016 मा पेपर चेकको प्रयोग गरी फाल्ने छ। तपाईंको बैंक खातामा केनेडाई कर भुक्तानीको प्रत्यक्ष जम्मा गर्न सीआरएलाई अनुरोध गर्नको लागि यहाँ थुप्रै तरिकाहरू छन्। प्रत्यक्ष जम्मा सुगम र सुरक्षित छ, तपाईंको भुक्तानीहरू समय सकियो र तपाईंको समुदाय मेलबक्समा भ्रमणहरूमा बचत गर्दछ।
तपाईंको आयकर फिर्ता रकम जाँच गर्नुहोस्
धेरैका लागि, आफ्नो आय कर को गरेर को सबै भन्दा ठूलो भाग उनको फिर्ती को इंतजार गर्दै छ।
तपाईंको आयकर फिर्ता रकम जाँच गर्न थुप्रै तरिकाहरू छन्।
तपाईंको क्यानाडा आयकर रिटर्न परिवर्तन गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो आयकर फिर्ती अनलाइनमा केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ; अरुलाई तपाईले मेल पठाउनुपर्छ। यदि तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यकता छ भने, तपाइँले गत वर्षका लागि आयकर प्याकेजहरू अनलाइन पाउन सक्नुहुनेछ।
सीआरएको साथ हाल तपाईंको ठेगाना राख्नुहोस्
सीआरएको तपाइँको हालको ठेगाना छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईँले CRA सँग आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यस तरिकाले तपाइँ बिना रुकावट बिना फिर्ता रकमहरू र लाभ भुक्तानीहरू, साथै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
क्यानाडामा सहमतिको उमेर
कन्फिडरेसनमा क्यानाडा सम्मेलनहरू
क्यानाडा पुरानो युग सुरक्षा पेंशनको लागि कसरी आवेदन गर्ने
क्यानाडाहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ पट्टि
क्यानाडा T4 कर स्लिप्स
जीवनी एक्टिस्ट इरिन पार्लिबी जीवनी
हराएको वा चोरी क्यानाडा पासपोर्ट कसरी बदल्नुहोस्
क्यानडामा अनलाइन खरीदारी र शिपिंग
1914 देखि 1919सम्म विश्व युद्ध म टाइमलाइन
टोमी आर्मी ब्रान्ड र यसको EVO चालकमा एक फिर्ता फिर्ता
परिवार इतिहास प्रकाशकहरू र डिमाण्ड सेवाहरूमा छाप्नुहोस्
तपाइँलाई प्ले लिपि पढ्न मद्दत गर्नको लागि5सुझावहरू
ADA के हो? घर मालिकहरूको लागि सजिलो पाठ
तपाईंलाई डायनामीटिक मार्क्स बारे स्पेनिश को बारे मा जानना चाहिए
शास्त्रीय कार्यहरू तपाईं गाई गर्न सक्नुहुन्छ तर नाम गर्न सक्नुहुन्न
जीप वानगरलगर्सको सर्वश्रेष्ठ र खराब विशेषताहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
Gettysburg मा Pickett को शुल्क
इङ्गल्याण्डका राजा रिचर्ड इ
स्कूलहरु मा प्रिंसिपल को भूमिका
उपनगरहरूको एक अवलोकन
वेबवार्म पतन (हाइफैंट्रिया क्युना)
Nietzsche को 'विल बिजुली' को अवधारणा
हकी लडाईहरूको इतिहास
प्रजाति प्रोफाइल: क्रैपी
कसरी सफल पुस्तक रिपोर्ट लेख्नुहोस्
6 महानतम परास्नातक सबै समयको गोल्फर्स
टेलरमैड R580 चालक तपाईंको लागि सही छ?
फ्लोरिडा विद्यार्थीहरूका लागि सार्वजनिक स्कूलहरूको सूची, K-12
फूहड शमिङ के हो? फ्लोरिडा शिमिंग को परिभाषा
ओरेगन राज्य जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
व्यवस्थाले स्कूलमा प्रार्थनाबारे के भन्छ?
सामान्यतया दुरुपयोग शब्दहरू: होर्ड र हर्डे
© 2021 ne.eferrit.com